Izazi-mlando zisitshela ukuthi iGibithe yayiyimpucuko yaseNigro-Afrika - i-AFRIKHEPRI FOUNDATION
Engeza isihloko kusiza
Indlela yokuqeda isibindi?
Abalando-mlando basitshela ukuthi iGibithe yayiyimpucuko yaseNigro-Afrika
By Samantha.B ngo-Agasti 19, 2019
Abantu abamnyama baseAfrika (abaprofesa uCheikh Anta Diop no-Obenga) banqobe kakhulu enkomfeni yeCairo e-1974. Kodwa i-Egyptology yaseYurophu iyaqhubeka nokukhohlisa uMlando!
AmaGreki namaLatini, ofakazi bokuzibonela baseGibhithe lasendulo, bahlale beqinisekisa ukuthi abaseGibhithe beba "emncintiswaneni" omnyama. Buka Kufakiwe 0 Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Herodotus, Diodorus, Aristotle, and Heliodorus:
UHerodotus, owaziwa ngokuthi ubaba womlando, isazi-mlando esingumGreki (480-425 BC), waya eGibhithe. Uyasitshela ukuthi abaseGibhithe lasendulo babenesikhumba esimnyama (i-melakroes) nezinwele eziqhamukayo (oulotrikhes) (Incwadi II, i-104).
KaDiodorus, mlando sangesikhathi sakhe ngesiGreki uKhesari Awugustu (63 14 BC JC-AD) kusitshela ukuthi Ethiopia okuye ababengaphansi kwemibuso yakwamanye amazwe Egypt (umqondo Athene: okwandisa ukwanda kwabantu kwaholela enyakatheni enyakatho). (I-Historical Library, Incwadi III, i-3,1).
U-Aristotle, isazi sesayensi, isazi sefilosofi, umfundisi ka-Alexander Omkhulu (389-322 BC), ekilasini abaseGibithe nabaseTopiya e abantu basendulo babengazi abanale isikhumba "abamnyama kakhulu" (agan Melanes) (physiognomy, 6)
Igama lesiGreki Heliodorus ubhala Chariclea intombazane ezimhlophe, okungukuthi ngaphambi abaseGibithe: "Yabuye wabheka phezulu, wabona azo amnyama (I-Ethiopic, tome1)
Kunoma yikuphi ukubhala kwe-hieroglyphic, isenzo esithi "kem" esuselwa egameni elimnyama lisho ukuthi "ukufeza, ukuphakama, ukufeza, ukukhokhela ukuqedela, ukukhonza kepha nokuba mnyama". Igama elithi kem lisho "ukuphelela, okuphelele, ukubophezela, umsebenzi".
U-Osiris, uNkulunkulu odumile waseGibhithe, unombala omnyama. Emibhalweni yamaPramidi kanye nencwadi yabafileyo, ubizwa ngokuthi "The Great Black". Nendoda evela e-eseningizimu yeGibithe (okuyinto kunjalo we oFaro lokuqala kanye unifier laseGibhithe, uFaro Narmer). Emibhalweni eminingi umGibhithe nonkulunkulukazi u-Isis kanye Hathor futhi Thot onkulunkulu Apis, min, noHorus abamnyama abafanelekayo, isiqu esithi "Black esikhulu" isetshenziswe ukuze nonkulunkulukazi emibhalweni omngcwabo yamakhosi eziningana waseGibhithe (PepiI, PépiII, Merenre) kuyilapho epithet "red" kwakuzokwenziwa kuphela unkulunkulu ububi onkulunkulu baseGibithe okungukuthi, uSeti, okubi isimiso kanye nohlobo amashinga e izinganekwane engcwele kwabaseGibhithe. USeti isikhumba amehlo abomvu futhi sicacile. Ungunkulunkulu we-Hyksos, abantu abanesikhumba esilungile abahlangana naye nonkulunkulu wamaSemite uBali. USeti ekuqaleni emelelwa imbongolo isisila sibheke phezulu, sifaniswa inyoka Apophis, isimiso ebumnyameni ngokuqhubekayo okusongela ukukhanya.
Isenzo esithi "desker" sisho "ukubomvu, ukubomvu" kodwa futhi "ukuthusa", "kem" (omnyama, ukuba omnyama) ngakho-ke konke okuhamba ngomqondo weqiniso-ubulungiswa, ukulingana kwe-cosmic (c ') okungukuthi, i-Maat ngolimi lwaseGibhithe).
Igama elithi "kem" (omnyama) lisetshenziselwa amagrafu abonisa iso nezinwele zabaseGibhithe. Njengoba ubaba we-Egyptology yanamuhla uJF Champollion wathi: "abamnyama, abavela embala wezinwele womncintiswano waseGibhithe".
Usuke usabela "Abalando-mlando basitshela ukuthi i-Egypt ..." Imizuzwana embalwa edlule